Hundixuruurammete Uduunni Dooramme
Wolootu uduunninni diwamino uduunnicho doorate, OptionAlt worora amadi nna hundixuruurammete uduunnicho iillatto geeshsha uduunnu giddoonni kisi. Galchammete aantenni uduunne doyisate, DooroAlt+Shifte kisatto yannara worora amadi.
Keyboorde horoonsidhe Wolootu uduunninni diwamino uduunnicho doorate, Isilaadete aana uduunnu giddoonni doyisate Tab xiiwi. Galchammete aantenni uduunne gidoonni doyisate, Shifte+Tab xiiwi.
Title is: Hundixuruurammete Uduunni Dooramme